Akụkọ - VIN Code Laser Equipment for wheeled Vehicle Industry
VIN Code Laser Equipment maka wheeled Vehicle Industry
Site na mmụba ụgbọala na-aga n'ihu na mba anyị, nsogbu mmetọ gburugburu ebe obibi nke ikpochapu ụgbọala na-adịwanye njọ. Ya mere, gọvanọ ahụ na-agbasi mbọ ike ịkwalite ụzọ ndụ akwụkwọ ndụ iji gbaa gburugburu. Onu ogugu nke ugbo ala ohuru na China na abawanye. Gbọala nwere ụkwụ abụọ bụ ndị ama ama n'okporo ụzọ ndị mepere emepe n'ihi ọnụahịa dị ọnụ ala na ọnụ ọgụgụ ha. Ugbu a, a na-ahụ ụgbọ ala eletrik nwere ụkwụ abụọ na ebe niile n'okporo ámá. Ma na mkpọsa nke GB ọhụrụ ahụ, steeti chọrọ ka enwee ikikere ịnwe ụkwụ abụọ na-agba n'okporo ụzọ.
N'ihi nke a, ụmụ amaala agafeela usoro maka ndebanye nke ugbo ala eletrik, mana enwere esemokwu n'etiti ndị nwe ụgbọ eletrik na ụlọ ahịa, ihe karịrị ọkara n'ime ha metụtara koodu VIN, nke gbadoro anya n'akụkụ atọ: ebe ahụ abughi koodu VIN na etiti ma obu akwukwo; koodu VIN na etiti ahụ adabaghị na asambodo ahụ; a na-eji koodu VIN eme ihe na mbụ. Ihe kpatara nsogbu ndị a bụ na ndị na-emepụta ugbo ala nwere ụkwụ abụọ emebeghị iwu nke koodu VIN.
Banyere ihe ịtụnanya a, ọkọlọtọ mba ọhụrụ chọrọ ka emee ka ụgbọala abụọ nwere ụkwụ abụọ nwee akara VIN nwere mkpụrụedemede 17 na ọnụọgụ tupu ha ebute ya. Nke a bụ ederede pụrụ iche maka njirimara ụgbọ, dị ka "ID Kaadị".
Ka ọ dị ugbu a, a na-ahụkarị koodu VIN site na iji igwe ntụpọ peen peen, mana ọkọlọtọ mba ọhụụ chọrọ ka omimi nrịba ama gafere 0.2mm, ma nwee ike ịpịpụta akara ọdịnaya ahụ. N'ihi omimi omimi nke ntụpọ ntụpọ peen marking enweghị ike iru ihe achọrọ nke ọkọlọtọ mba ọhụrụ, ihe odide ahụ ga-efu ma doo anya. Igwe ahụ na-eme mkpọtụ dị ukwuu, nke gabigara ókè oke ntị mmadụ nwere ike ịnagide, na-emetụta ahụike na ọgụgụ isi nke ndị ọrụ. Ya mere, BOLN laser ahaziri igwe VIN akara akara maka ụlọ ọrụ nwere ụkwụ abụọ.
Eriri laser marking igwe na ọtụtụ-eji electronic mmiri, ngwaike, eletriki ụlọ ọrụ, kwa ụbọchị n'ji ngwongwo, sensọ, na akpaaka akụkụ, 3C ngwá electronic, crafts, nkenke ngwa, onyinye na ihe ịchọ mma, ọgwụ equipments, elu-ala-na-voltaji ngwa, ụlọ ịwụ ngwa, ụlọ ọrụ batrị, ụlọ ọrụ IT, wdg. Ihe odide akara ahụ doro anya, ọ dịghị mfe iyi, ma nwee ọrụ nke akaebe. Ọzọkwa, ahaziri marking igwe nwere ike interface na ụlọọrụ MES usoro ma na-ọ bụla VIN koodu maka traceability. BOLN laser ahaziri igwe akara akara VIN maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, dị ka YADEA, Segway-Ninebot, Niu Teknụzụ.